क्षेत्रीय सभापतिको पार्टी कब्जा गर्ने बद्नियतले समस्या बढेको हो : गिरी
शुक्रबार, भदौ ४, २०७८ बागेश्वरी पोस्ट
पटक पटक सर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन फेरि नयाँ मितिमा धकेलिएको छ । पछिल्लो पटक निर्धारित मितिमा हेरफेर भएन भने भदौ १८ देखि तल्लो तहका अधिवेशन शुरु हुन्छन् । तर, निकै पेचिलो बनेको क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । भदौ २ गतेसम्म टुंग्याउने भनिएपनि अझै टुंगिन सकेको छैन । बाँकेको क्षेत्र नम्बर १ पनि विवादको घेराभित्र छ । यहाँको विवादको घेरा साँघुरो हुनुको साटो झन बढेर गएको बताइन्छ । समायोजनका नाममा संस्थापन पक्षले मनोमानी गरिरहेको आरोप छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर हामी निरन्तर संवाद गरिरहेका छौं । आजको बागेश्वरी संवादमा हामीले क्षेत्र नम्बर १ मा देखिएको क्रियाशील सदस्यता विवादका विषयमा क्षेत्रीय सचिव डिल्ली गिरीसंग संवाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ, गिरीसंग बागेश्वरी पोष्टका प्रधान सम्पादक नवीन गिरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
बाँके क्षेत्र नम्बर १ को क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगियो त ?
यो विवाद भएको लामो समय भयो । अहिलेसम्म विवाद टुंगिएको छैन । १८ गते वडा अधिवेशन तय गरिएको छ । तर, अहिले तपाईंंसंग मैले कुरा गर्दै गर्दाको समयसम्म पनि विवाद टुंगिएको छैन । विवाद अझ बढेर गएको छ ।
विवाद नसुल्झेर बढिरहनुको चुरो कुरो के हो ?
वडा कार्यसमिति र वडा भेलाले निर्णय गरी शुल्क बुझाएरै पठाएका नामहरु गाउँ नगरबाट अनुमोदन हुँदै प्रदेश क्षेत्रीय कमिटिले निर्णय गरेर पठाएकोमा क्षेत्रीय सभापति माधवराज खत्रीको उपस्थिति र निर्देशनमा ती क्रियाशील सदस्यको नामावलीलाई लत्याएर आफू अनुकुलका मान्छे केन्द्रमा सिफारिस गरेर पठाइएकाले शुरुमा विवाद सिर्जना भएको हो । त्यसमा उहाँले नरैनापुरका तीन वटा वडा कोल्याप्स बनाउनुभएको थियो । वडा नम्बर १, ३ र ५ उहाँले कोल्याप्स बनाउनुभयो । वडा नम्बर २ मा ४० जनामा १५ जनाको नाम मात्र इन्ट्री गर्नुभएको थियो । त्यसमा पनि ८ जना सिफारिस नगरिएका मान्छे थिए । त्यस्तै कोहलपुरको ८ र १२ नम्बर वडा उहाँले कोल्याप्स पार्नुभएको थियो । वडा नम्बर १० को ४५ जना छुटेका थिए । राप्तीसोनारीको पनि त्यस्तै अवस्था थियो । उहाँले नितान्त नियतबश यो काम गर्नुभएको थियो । तानाशाह, सर्वसत्ताबाद, मैमत्ताबाद—यी शब्दहरु म उहाँलाई प्रयोग गर्छु । यसरी उहाँले यो प्रबृत्तिले केन्द्रमा नाम सिफारिस गर्नुभयो । यो भइसकेपछि हामी केन्द्रमा आयौं । छानविन समितिमा हामीले उजुरी ग¥यौं । उहाँ पनि यहाँ आउनुभयो । छानविन समितिले हामीलाई बसायो । त्यसपछि नामहरु इन्ट्री गर्ने कुरा भयो । त्यति भएपछि हामी बाँके फर्कियौं । तर, उहाँले फेरि पछि समायोजनका नाममा अझ धेरै आफ्ना प्याकका मान्छे थप्नुभएछ । यसले विवाद झन बढेर गएको छ ।
वडाले सिफारिस नै नगरेका नामहरु कसरी इन्ट्री हुन सम्भब भयो त ? केन्द्रले यसमा छानविन गरेन ?
तपाईंसंग कुरा गरिरहँदा यतिबेला म काठमाण्डौमै छु । मलाई साह्रै दुःख लागेको छ । केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यताको काम गर्ने जुन सचिवालय छ, यो नै उहाँ (माधबराम खत्री) कै पक्षमा छ । त्यसकारण फर्जी नामहरु इन्ट्री भइरहेको छ । संस्थापन इतर पक्ष भनेर हामीलाई ट्याग लगाइयो । संस्थापनवालाहरुको सबैतिर पहुँच छ । त्यही पहुँचको आधारमा उहाँले इन्ट्री गराउनुभएको छ । आफूले चाहेका मान्छेको नाम इन्ट्री गराउनुहुन्छ, आफूले नचाहेका मान्छेको नाम फाल्नुहुन्छ ।
विवाद झनै बढेर गएको अवस्थामा समस्या कसरी सुल्झिन्छ त, तपाईंहरुको बटमलाइन के हो ?
हाम्रो बटमलाइन भनेको त पार्टीले जुन नीति, नियम, निर्देशिका बनाएको छ, त्यसको आधारमा वडा तहबाट प्रक्रिया पु¥याएर आएका नामावलीलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने हो । यो बाहेक हाम्रो अर्को कुनै कुरै छैन । वडाबाट आएका नामलाई क्षेत्रीय सभापतिले खुरुखुरु इन्ट्री गरिदिँदा त यसमा कुनै समस्यै छैन । समस्या त क्षेत्रीय सभापतिको मनोमानी र मनपरीले गर्दा सिर्जना भएको हो । अब यतिसम्म भयो कि म बहालवाला सचिव मेरै नाम छैन । क्रियाशील छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म मेरो नाम थियो । तर, पछिल्लो एक हप्ताकै बीचमा मेरो नाम गायब गरियो । यतिसम्म हर्कत भइरहेको छ ।
कस्तो विडम्बना क्षेत्रीय सचिवकै नाम गायब भएछ, यसको अन्तरकथा के हो ?
म अचम्म परेको छु । यस्तो किन गरियो होला भनेर । जसको सचिवालयमा पहुँच छ, उसले भन्दा अरु कसले गर्न सक्छ ? जसले आफूलाई संस्थापन पक्ष, हामी नै पार्टी हो, हामी नै बलियो छौं, हामी नै कांग्रेस हौं भनेर दम्भ देखाइरहनुभएको छ, उहाँहरु भन्दा अरु कसले यस्तो गर्न सक्छ ? मैले क्षेत्रीय सभापतिमा दाबेदारी गरिरहेका कारण केहीलाई अपच भएको छ, उनैहरुले यस्तो गरेका होलान्, तर पनि म विस्तृतमा खोजी गर्दैछु यसको कारण ।
तपाईं त क्षेत्रीय सचिव, जिम्मेवार मान्छे, क्षेत्रीय सभापति एक्लैले यो सबै काम गर्न सम्भब थियो त ? तपाईंको यसमा जिम्मेवारी हुँदैन ?
निश्चय नै । म निर्वाचित सचिव हुँ । साथीहरुले मलाई काम गर्ने जिम्मेवारी सम्पनुभयो । म त्यही हिसाबले लागेको पनि हो । तर, बिडम्बना हाम्रो पार्टी माथि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म सबै सभापतिमार्फत् चल्ने पार्टी । एकल हिसाबले चलाउने परिपाटी छ । त्यस्तो नहुनु पर्ने हो । तर, भइरहेको छ । १३ औं महाधिवेशनमा माधवजी एउटा टिमबाट जित्नुभएको हो, मैले अर्को टिमबाट जितेको हो । हामीले निर्वाचन जितेपछि दुईटा अलग अलग टिम भएर प्रस्तुत हुँदा पार्टी चल्दैन भन्ने हिसाबले मिलेर पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्दै अघि बढ्ने प्रण ग¥यौं । यसमा अग्रज नेताहरु निरन्जनसिंह सिजापति र तप्त पौडेलले मध्यस्थता गर्नुभयो । त्यसपछि मैले भने सभापतिजी तपाईं सफल हुनु भनेको म सफल हुनु हो । मैले तपाईंलाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्छु । तर, नीति र नियमभित्र रहर मात्र काम गर्छु । तपाईंले व्यक्तिगत स्वार्थको काम भन्नुभयो भने म त्यो पक्षमा छैन भनेर मैले भनें । पार्टीको काम म प्रतिबद्ध भएर गर्छु भनेर बचनबद्ध भएँ । मैले यो कुराको पालना स्थानीय तहको चुनावसम्म गरेँ । मेरो दुर्घटना भएर खुट्टा भाँचिएको बेला समेत बैशाखी टेकेर मैले काम गरेको छु । तर, स्थानीय चुनावमा उहाँले एकलौटी काम गर्न खोज्नुभयो । माइनट लिएर भाग्नुभयो । होटलमा बसेर एकलौटी निर्णय गर्नुभयो । एकलौटी टिकट बाँड्नुभयो । त्यसपछि उहाँ र मेरो दुरी बढ्यो । उहाँले त्यसपछि बैठक नै बसाउनुभएको छैन । बैठक बसाएपनि गुटगत बैठक बसाउनुहुन्छ । निर्वाचित सचिवलाई केही थाहा नै हुँदैन । यो हिसाबले उहाँ अगाडि बढिरहँदा उहाँसंग काम गर्ने अवस्था बनेन । मैले विधि, विधान, पद्धति अनुसार चल्न नियमित बैठक र संस्थागत निर्णयका लागि बारम्बार आग्रह गरें । तर, उहाँले नजरअन्दाज गर्नुभयो । उहाँलाई मैले पठाएका मेसेज, मेले गरेका फोन कल सबै मसंग सुरक्षित छन् । मैले क्रियाशील फाराम वितरणका लागि बैठक बसौं सभापतिज्यू भनेर मेसेज गर्दा, त्यसका लागि फोन गर्दा कहिल्यै रिप्लाई आएन । पार्टी कार्यालयमा बसेर नाम इन्ट्री गरौं भन्दा पनि मान्नुभएन । एकलौटी ढंगले चल्नुभयो । यसमा मलाई उहाँले सहभागी नै गराउन चाहनुभएन ।
तर, क्षेत्रीय सभापति र तपाईंहरु (संस्थापन इतर) बीच कसले धेरै क्रियाशील सदस्यता बनाउने भन्ने लडाईं हो यो भन्छन् नि ?
बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो लाग्न सक्ला । तर, त्यो हुनै सक्दैन । बढी त उहाँले बनाइसक्नुभयो त । अब हामीले बढी बनाउने त ठाउँ नै छैन । किनकी हाम्रो पहुँच छैन त्यो ठाउँमा । उहाँले बढी बनाइसक्नुभयो । तर, उहाँले गलत हर्कतले गरेका काम रोक्नुपर्छ भन्ने मात्रै लडाईं हो अब । उहाँले गरेका गलत काम रोक्ने कुरा मात्रै अब ।
एकले अर्कोलाई सिध्याउने घृणित खेलले अन्ततः धक्का त कांग्रेसलाई नै लाग्छ नि हैन र ?
मलाई पनि दुःख लाग्छ । आखिर हामी सबै कांग्रेस हौं । कांग्रेसलाई नै कमजोर बनाउने खेल हामी किन खेल्छौं ? यो चिन्ताको विषय हो । आफू बन्न पार्टी सिध्याउने परिपाटी हाबी हुनु दुःखद् कुरा हो । हामी कसैलाई सिध्याउने भन्दा पनि विधि, पद्धति र संस्कारको लागि लडिरहेका छौं । कांग्रेस बनाउने कुराको चिन्ता हामीलाई हो । मैले माधवजीलाई बारबार भनेको छु । मैले संगै बसेर उहाँलाई भनेको छु—‘माधव दाई तपाईं बराबरको पदीय हैसियत भएको नेता एक नम्बर क्षेत्रमा छैनन् । एक दशक क्षेत्रीय सभापति भएको मान्छे तपाईं । क्षेत्रीय सभापति हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडेको मान्छे, त्यसैले तपाईं गुटको नेता होइन सबैको नेता बन्नुस्’ मैले भनेको छु । सल्लाह दिएको हुँ । तर, उहाँ गुटको नेता बन्न खोज्नुभयो । मैले उहाँलाई भनें ‘तपाईंले वडा तहबाट सिफारिस भएर आएका क्रियाशील बन्न योग्य ५ सय मानिसलाई जानीजानी छुटाइदिनुभयो । ती मानिस तपाईंका विरुद्ध लागे तपाईंको के हुन्छ हबिगत ?’ तर, उहाँ सच्चिन खोज्नुहुन्न । हेर्नुस् जब नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले अरुलाई न्यायको आँखाले हेर्न सक्दैन, समस्या आउँछ । हाम्रो एक नम्बरमा भएको पनि त्यही हो । अन्यायको आँखाले हेर्ने काम भएको छ । १३ औं महाधिवेशनमा उहाँसंग काँधमा काँध मिलाएर हिंडेका मान्छे को छन् अहिले उहाँसंग ? सबैलाई लखेट्ने ? सबैलाई माइनस गर्ने ? यही हो उहाँको प्रबृत्ति ।
तर, तपाईंहरुको पार्टीमा तपाईंहरुले जसलाई क्रियाशील सदस्यको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ, उनीहरु नै अर्को पार्टीमा गइदिने, कस्तो विडम्बना हो, कोहलपुरमा त्यस्तै घटना भयो । क्षेत्रीय समितिमा हुनुहुन्छ तपाईं । यो लाज लाग्ने कुरा होइन ?
यो कस्तो भयो भन्दा नि हामी पार्टी बनाउनतिर लागेनौं । हामी व्यक्ति बनाउनतिर लाग्यौं । पार्टीमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरु पाखा लगाउँदै आफ्ना मान्छे खोज्यौं । म एउटा उदाहरण दिन्छु-कोहलपुर २ का नेविसंघका एक जना केन्द्रिय सदस्य कमल शाही जसको रगतमा कांग्रेस छ, उ जस्ता व्यक्तिलाई क्रियाशील नदिएर कांग्रेसै नबुझेको, कांग्रेसमै क्रियाशील नभएका व्यक्तिलाई कागजमा कांग्रेस बनाएर क्रियाशील बाँड्ने काम भयो । यसले समस्या भएको हो । कसैको घरमा बसेको भरमा, कसैको घरमा भात खाइदिएको आधारमा कांग्रेस बनाएर हुन्छ ? उनीहरु न हिजो कांग्रेस थिए, न आज भए । जहाँ हुन् त्यहीँ गए । आफूलाई बलियो बनाउन जथाभावी क्रियाशील बाँड्दा यस्तो भएको हो । यसको जिम्मेवारी क्षेत्रीय सभापतिले लिनुपर्छ । विना अनुहार नाम मात्रै बाचन गरेर पार्टीको सदस्यता बाँड्ने केन्द्रिय सदस्यले लिनुपर्छ ।
यहाँले अघि समायोजनका नाममा भएको बेथितिको कुरा त गर्नुभयो, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा लगायतका पार्टीबाट आएका नामावलीमा पनि कांग्रेस कार्यकर्ताको नाम छ भन्ने सुनियो ? के हो सत्यता ?
फोरम लोकतान्त्रिकले चुनावमा ल्याएको भोट कति ? राप्रपाले ल्याएको भोट कति ? स्थानीय तहकै कुरा गर्दा ती दलले तत्कालीन अवस्थामा कोहलपुर, राप्तीसोनारी र नरैनापुरमा ल्याएको मत कति हो भनेर अहिले पनि हामी डाटा विश्लेषण गर्न सक्छौं । जस्तै उदाहरणका लागि नरैनापुरको वडा नम्बर ५ मा कांग्रेसले जितेको छ । कांग्रेसको राम्रो पकड भएको वडा हो त्यो । त्यहाँ कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य २९ जना छन् । स्थानीय चुनावमा १० भोट ल्याएको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका क्रियाशील सदस्य डेढ सय जना हुन्छन् ? यस्तो पनि हुन्छ ? समायोजनका नाममा अरु पार्टीका भनेर हिजैका कांग्रेस जसले उहाँ (माधवराम खत्री) लाई माया गर्छन्, उनीहरुको नाम आएको छ । विगतमा जसलाई उहाँले आफ्ना आसेपासे ठान्नुहुन्थ्यो तिनै मान्छेको नाम छ । यतिसम्म भएको छ कि माधवजीको भाई विजय केसी राप्तीसोनारी १ का बासिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँ कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हो । तर, उहाँ कहिलेदेखि फोरम लोकतान्त्रिक हुनुभयो र नरैनापुरको वडा नम्बर ४ मा जानुभयो ? यस्तो लाजमर्दो काम पनि गर्ने हो ? जहाँ मधेशीको बसोबास नै छैन, त्यहाँ मधेशीको नाम छिराउने । जहाँ पहाडी छैनन्, त्यहाँ पहाडीको नाम छिराउने । यो त नितान्त समावेशिताको नाममा फर्जी काम गरेर पार्टी कब्जा गर्ने नियत बाहेक केही होइन । उहाँको यो कामलाई सचिवालयले साथ दिएको छ । त्यसैले उहाँ यस्तो हर्कत गर्न सकिरहनुभएको छ ।
अब अन्त्यमा, यस्तो अवस्थामा भदौ १८ को वडा अधिवेशन कसरी सुनिश्चित होला त ?
आशा गरौं अब एक दुई दिनमै विधि, विधान, नियम र निर्देशिका बमोजम पार्टी बचाउने र बनाउने कामलाई मलजल हुने गरी असल नियतका साथ उचित निर्णय हुनेछ । यो विवादलाई सही तरिकाले टुंग्याएर अधिवेशनको माहोल बन्नेछ । त्यसो भयो भने हामी पनि जिल्लामा पुगेर अधिवेशनको माहोलमा होमिन्छौं ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ४, २०७८, १७:४१:००
शुल्क नबुझाएका र प्रक्रिया नपुगेका नामहरु इन्ट्री नगरेको हो : क्षेत्रीय सभापति खत्री
वडाले सिफारिस गरेका क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री नगर्नु क्षेत्रीय सभापतिको राजनीतिक अपराध होः सचिव पौडेल
माधव नेपाल समूहकै कारण चुनावमा जानु परेको हो: पार्वत गुरुङ
निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन निरन्तर अनुसन्धान जारी छ